Mobile ခဲဆော်ပညာရှင်ကြီးများခင်ဗျာ...(Ail in One PoSt)၂4.3..2၀1၅ - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Mobile Hardware Tutorials Mobile ခဲဆော်ပညာရှင်ကြီးများခင်ဗျာ...(Ail in One PoSt)၂4.3..2၀1၅
Mobile ခဲဆော်ပညာရှင်ကြီးများခင်ဗျာ...(Ail in One PoSt)၂4.3..2၀1၅
Thiha Htike at 9:40:00 PM Mobile Hardware Tutorials,
အခုမှစတင်လေ့လာသူတွေအတွက်ပေါ့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ၁၂၃၄ ပေါ့ အစကနေ လူများတွေပြောတယ် လည်ဘယ်ထိပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ လည်ဘဲအထိ တင်သွားမှာပါ ဒါပေမဲ့
ကိုယ်ပိုင်စာသားတွေမဟုတ်တော့ နားမလည်တာရှိရင်သေချာထပ်ဖတ်ပါနားလည်သွားပါ ကျွန်တော် ဆရာတွေတွေ့ရင် " ဟား .. ဟား..ဟား.." လို့ကျွန်တော်တင်သောပို့စ်တွေကို
ရယ်ပါလိမ့်မယ် ။ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းလေ့လာနေဆဲပါ ဘာမှမတတ်ပါဘူး ဒီအတိုင်းပဲ လိုအပ်မယ်ထင်လို့ Sharing လုပ်ရတာပါခင်ဗျာ.. ဟုတ်ကဲ့ ... ကျွန်တော်က သာမန်Software
သမားလေးပါ ခင်ဗျာ...ယခုဒီပို့စ်ထဲမှ စာသား၊ပို့များသည် ဒီဆိုဒ်မှာရှိချင်ရှိပါလိမ့်မည် ၊ ဒီဆိုဒ်မှာရေးသော ဘလော့ခ်ဂါတွေရေးရင်ရေးခဲ့ဖူးမယ် ၊ ဒါပေမဲ့နားလည်ပေးပါ ၊ယခုမှစတင် Media
Device များကိုသုံးမဲ့ သူများအတွက် သူတို့မရှာဖွေတတ်လို့ တောင်းဆိုလို့တင်ပေးရတာ ဆရာ၊ညီအကိုများနားလည်ပေးကြပါနော်..် အပေါ်က ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ Mobile Hardware
Service ကိုလေ့လာနေတဲ့ အဲ ပြင်ဆင်နေတဲ့သူများအတွက် ကျွန်တော် Hardware ဆရာများ Sharing လုပ်ထားတာမှတစ်ဆင့် ပြန်လည် Share လုပ်တယ်ပေါ့ ဒါကြောင့် Hardware
ကိုလေ့လာနေသူ ၊ ပြင်ဆင်နေသော ညီအကိုဆရာများကို တင်စားသောအနေဖြင့် "Mobile ခဲဆော်ပညာရှင်ကြီးများခင်ဗျာ... " လို့ တင်စားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား... :D ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ကတော့
Mobile Hardware ပိုင်းတွေကြည့် သည်းသန့်တင်သွားမှာပါ...
ဒီပို့စ်လေးကတော့ ဒီဆိုဒ်မှာတင်ပေးထားပြီးသားပါ အစဉ်လိုက်ဖြစ်အောင်တင်ပေးလိုက်တာပါ
Credit to MCT
Samsung Galaxy Y S5360 ကို လွယ်ကူစွာ ဘယ်လိုRootဖော...
Y523-L076,Android 4.4, EMUI2.0，V100R001CHSC01_B021
Y523-L176,Android 4.4.2,Emotion UI 2.0，V100R001CHS...
၂၀၅၀ အတွင်း ထွက်ပေါ်လာမည့် မိုဘိုင်းဆိုင် ရာ အိမ်တ...
Winrar Software ကိုအသုံးပြုပြီး ဖိုင်ခွဲနည်း-ဆက်နည်း
Facebook Account က်ို အိမ်ဖုန်း 01-546--- ဖြင့် ဖွ...
သင်္ကြန်ဆိုတာဘာလဲတဲ့# ဒီပို့စ်က သင်္ကြန်ဆိုတာဘာလဲမသိသေ...
Sony 4.3 & 4.4.2 အတွက် Root & Myanmar Font လုပ်နည်း
Mobile ခဲဆော်ပညာရှင်ကြီးများခင်ဗျာ...(Ail in One P...
Y511-U30 Flash Tool Firmware (100% OK)
အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့Really Lear...
Clash of Clans (COC) မှာမြန်မာစာမြင်ရအောင် အလွယ်တက...
Huawei Firmwares < For PC >
အသစ်ထွက်မည့် iPhone တွင် Force Touch နည်းပညာထည့်သွ...
မေးထားသောသူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ... (All in o...
Facebook ချစ်သူများအတွက် Facebook နည်းလမ်းလေးများ....
ဘ၀ကိုအောင်မြင်ချင်စိတ်ပေါ်လာပြီလား... (Ali In OnE P...
Google မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ရင် ဘာတွေထောက်...
အင်္ဂလိပ်စာများလေ့ကျင့်နိုင်တဲ့ English Grammar Game...
Asus က 4G ပါရှိသော Fonepad7FE375CL ကို ကြေညာ
C8817D ကို Twrp Recovery အငှားတက်ပြီး root မယ်
DOOV L1C LOLLIPOP ROM DOWNLOAD
အွန်လိုင်းသုံးရင်း MyanmarPTC ဆိုဒ်မှာ ငွေရှာမယ်
RS File Recovery 3.6 Full and Portable
Partition တွေကို GPT type ကနေ MBR ပြောင်းပြီး wind...
Inovo I-405 Firmware and IMEI Backup
မေးထားသူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပြီနော်...(All in one...
Deep Freeze ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ CCBoot v 3.0 20...
ဖုန်းထဲမှာ ဗွီဒီယို editor လုပ်မယ်-VideoShow: Vide...